काेराेनाकाे नि:शुल्क उपचारकाे नाममा ठगी : मृत्यु भइसकेकालाई पनि भेन्टिलेटरमा ! – उज्यालो खबर
काेराेनाकाे नि:शुल्क उपचारकाे नाममा ठगी : मृत्यु भइसकेकालाई पनि भेन्टिलेटरमा !
चितवन । सरकारसँग कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने सम्झौता गरेको चितवन मेडिकल कलेजले पैसा लिएको भन्दै सात दिनमा नौ जनाले उजुरी दिएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले निःशुल्क उपचार भए/नभएको भन्दै उजुरी दिन सूचना जारी गरेपछि आइतबार अन्तिम दिनसम्म नौ जनाको उजुरी परेको हो । ९६६ जनाको उपचार गरेको र उनीहरुबाट १० करोड ९५ लाख आठ हजार रुपियाँ माग दाबी गर्दै चितवन मेडिकल कलेजले सरकारसँग भुक्तानी माग गरेको छ।
सरकारले निःशुल्क उपचार गर्न भने पनि अस्पतालले कोरोना सङ्क्रमितसँग पैसा असुलेको पीडितले बताएका छन्। उजुरी हाल्नेमध्ये गोरखाका विष्णु श्रेष्ठले भन्नुभयो, पैसा नदिई अस्पतालले कसैलाई उपचार गरेको छैन र कोभिड भएका सबै चर्को रकम तिर्न बाध्य भएका छन् ।” दाजु रामलाल श्रेष्ठलाई गत जेठ २ गते उपचारका लागि अस्पतालमा लैजानुभएका श्रेष्ठले कोमिड देखिएपछि हरेक दिन रगत परीक्षण गर्न लगाउने र हरेक पटकको परीक्षणमा चार हजारदेखि छ हजार रुपियाँसम्म लिने गरेको बताउनुभयो ।
मृत्यु भइसकेको थाहा पाएर पनि भेन्टिलेटरमा राख्ने र दुई दिनपछि मृत्यु भयो भनेर जानकारी दिने गरेका थिए, श्रेष्ठले भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, मेरी दाजुको अबस्था गम्भीर छ भन्दै पाँच दिन भेन्टिलेटरमा राखेर अन्तिममा मृत्यु भयो भनेर जानकारी दिइयो। हामीले आश मारिसकेका थियौँ, अवस्था के छ भनेर जानकारी दिन दबाब दिँदासमेत चुप लागेर बसे। पछि दाजुको जेठ २० गते मृत्यु भएको जानकारी दिइयो । मृत्युको प्रमाणपत्र लिँदासमेत हृदयाघातबाट मृत्यु भएको भन्दै कुटो कागज बनाएर हैरानी दिएको दुःखेसो उहाँको छ ।
उहाँले कोभिड भएर मेन्टिलेटरमा उपचार गर्न गएकाहरू थोरै मात्र निको भएको आफूले देखेको बताउनुभयो । “मैले तीन लाख रुपियाँ तिरेको दाबीसहितको उजुरी गरेको छु, अन्य बिल पनि सुरक्षित छ,” उहाँले भन्नुभयो, प्रशासन कार्यालयवाट न्याय पाइएन भने अख्तियारमा पनि उजुरी हाल्नेछ। गत वैशाखमा आमालाई कोभिडको उपचार गराउन अस्पताल लैजानुभएका भरतपुर महानगरपालिकाका हरिशचन्द्र बानियाँले उपचारपछि १० दिनमा तीन लाख रुपियाँ तिरेर आमालाई घरमा ल्याउनुभयो । उहाँले बिल भुक्तानी गरे पनि अस्पतालले निःशुल्क उपचार गराएको भन्दै सरकारसँग माग दाबी गरेको छ । सञ्चार माध्यममा समाचार आएपछि आफूले प्रशासनमा उजुरी हालेको जानकारी बानियाँले दिनुभयो ।
उजुरी आउने क्रम जारी रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी खेमराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो । कुनै रीत पुगेका उजुरी परेका छन् कुनै रीत नपुगेका छन्, उहाँले भन्नुभयो, “सबैको उजुरी हामीले लिएका छौँ ।चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आस्मान तामाङले उजुरी आएकालाई मात्र होइन, सूचनामा प्रकाशित ९६६ जनाको विषयमा चितवन मेडिकल कजेलका सञ्चालकलाई राखेर छलफल गर्ने जानकारी दिनुभयो । “छलफलबाट निकास निस्केमा यहीं समाधान हुन्छ, निस्केन भने मन्त्रालयमा अनुसन्धानको रिपोर्टसहितको विवरण जानेछ । गाेरखापत्र दैनिकबाट